Guddoomiyaha Golaha Shacabka oo ka tacsiyadeeyay geerida Ra’iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya – Kalfadhi
Guuddomiyaha Golaha Shacabka BJFS Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxman ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Ra’iisul wasiirihii hore ee dalka Soomaaliya marxuum Xassan Abshir Faarax.
Marxuumka oo sidoo kale horey usoo noqday Guddoomiyaha iyo Duqa magaalada Mogadishu, waxaa uu ku geeryooday magaalada Ankara ee dalka Turkiga, halkaasi oo muddooyinkii dambe uu ku xanuunsanayay.
“Innaa Lillahi Wa Inaa Ilayhi Raajicuun. Anniga oo ku hadlaya magaca Xildhibaannada iyo Guddoonka Golaha Shacabka, waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan ehelada iyo qarabadii uu ka geeryooday marxuumka Xassan Abshir Faarax”.
“Waxa uu kaalin weyn kasoo qaatay dowladnimada iyo dib-u-dhiska dalka. Waxaa Alle Subxaanahu Watacaala Uga Baryaa Inuu Naxriistiisa Janno Uu Ka Waraabiyo Dhamman Ummada Soomaliyed Anaguna Samir Iyo Iiman Uu Naga Siiyo”, ayuu yiri.
Dhinaca kale Xildhibaanno iyo Senatoro ayaa ka tacsiyadeeyay geerida.
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyadeeyay geerida Marxuum Xasan Abahir Faarax